Mpanamboatra Ball Bearing , mpamatsy - China Ball Bearing Factory
● Single andalana lalina Groove baolina bearings, rolling bearings no tena solontenan'ny rafitra, be dia be ny fampiharana.
● Torque friction ambany, mety indrindra amin'ny fampiharana mitaky fihodinana haingana, tabataba ambany ary vibration ambany.
● Ampiasaina indrindra amin'ny fiara, herinaratra, milina indostrialy hafa.
● Ny endrika dia mitovy amin'ny an'ny andalana tokana amin'ny làlam-baolina lalina.
● Ankoatra ny mitondra ny radial entana, dia afaka ihany koa ny axial entana miasa amin'ny lafiny roa.
● Fifanarahana tsara eo anelanelan'ny hazakazaka sy ny baolina.
● Lehibe sakany, entana lehibe.
● Tsy misy afa-tsy amin'ny fanosehana misokatra ary tsy misy tombo-kase na ampinga.
● Ampiasaina indrindra amin'ny fanekena ny enta-mavesatry ny radial, nefa koa mahatanty enta-mavesatra axial.
● Rehefa mihamitombo ny fivoahana amin'ny radial amin'ny fitondra, dia manana ny asan'ny baolina mifandray amin'ny zoro.
● Mahazaka enta-mavesatra axial lehibe izy io ary mety amin'ny fandidiana haingana.
Lalana tokana Angular Contact Ball Bearings
● Tsy mahazaka enta-mavesatra axial amin'ny lalana iray ihany.
● Tsy maintsy apetraka tsiroaroa .
Lalana roa sosona Angular Contact Ball Bearings
● Ny famolavolana ny roa-andalana zoro fifandraisana baolina bearings dia amin'ny ankapobeny mitovy amin'ny andalana tokana angular fifandraisana baolina bearings, fa mitana toerana kely axial.
● Mahazaka radial entana sy axial entana miasa amin'ny lafiny roa, dia afaka mametra ny axial fifindran'ny ny andry na trano amin'ny lafiny roa, ny fifandraisana Angle dia 30 degre.
● Manome rindrankajy mitondra henjana avo, ary mahatanty ny fanonganana Torque.
● Ampiasaina betsaka amin'ny kodiaran'ny fiara aloha.
Efatra-Point Ball Bearings
● Ny efatra-teboka fifandraisana baolina mitondra dia karazana misaraka karazana mitondra, koa azo lazaina ho andiana angular fifandraisana baolina mitondra izay afaka mitondra ny bidirectional axial entana.
● Miaraka amin'ny andalana tokana sy roa andalana angular contact ball bearing function, high speed.
● Tsy miasa araka ny tokony ho izy izy io rehefa miforona ny fifandraisana roa.
● Amin'ny ankapobeny, dia mety amin'ny enta-mavesatra axial madio, enta-mavesatra axial lehibe na asa haingana.
●Ity dia manana ny fiasan'ny Tuning mitovy amin'ny mandeha ho azy ny tenany-aligning baolina mitondra
● Mahazaka radial entana sy axial entana amin'ny lafiny roa
● Mahazaka enta-mavesatra radial lehibe, mety amin'ny entana mavesatra, enta-mavesatra
●Ny mampiavaka azy dia ny raceway peratra ivelany dia boribory miaraka amin'ny asa afovoany mandeha ho azy
●Namboarina hahatohitra ny enta-mavesatry ny tosika
●Misy peratra miendrika fanasan-damba miaraka amin'ny làlam-pihodinana baolina
●Mifanohitra amin'izany ny andrin'ny baolina
●Mizara ho karazana seza fisaka sy karazana baolina mampifandanja ny tenany
●Ny mitondra dia afaka mitondra axial entana fa tsy radial entana